Ahoana no hanereko ny Windows 7 hanavao? - Faq
Tena > Faq > Win7 tsy misy fanavaozana - vahaolana azo ampiharina
Win7 tsy misy fanavaozana - vahaolana azo ampiharina
Ahoana no hanereko ny Windows 7 hanavao?
Safidio ny Start> Control Panel> Security> Security Center>Windows Updateamin'nyam-baravarankelyIvotoerana fiarovana. Safidio ny jery hitavaovao faranyao amin'nyWindows Window fikandrana. Hizaha ho azy ny rafitra raha misyvaovao faranyizay mila apetraka, ary asehoy nyvaovao faranyizay azo apetraka ao amin'ny solo-sainanao.
Azafady mba mariho fa mbola eto i Microsoft dia manolotra ny fahaizana mamorona kapila USB bootable na DVD ho an'ny Windows 10 ary manao fametrahana madio ny Windows amin'ny solosaina miaraka amin'ny famafana ny angon-drakitra feno, saingy lohahevitra hafa io ankehitriny raha dinihina ny fomba fanavaozana ny solosaina ary izy rehetra dia mamonjy angon-drakitra, mila manindry ny fitaovana fampidinana ianao izao ary mamorona sp Fampiasa manokana no alaina ao amin'ny solosainao izay hampidina ny Windows 10 ary hanavao ny solosainao. Ny fampiharana dia nameno Open the folder Downloads ary tsindrio indroa ny hitsin-dàlana Miomàna ho an'ny asa natomboka Eto dia tsy maintsy ekenao ny fehezan-dalàna raha tsy eto amin'ity fikandrana ity dia afaka misafidy mamorona tsato-kazo USB azo trandrahana ianao na mamorona dvdi, misafidy manavao ny solosaina manaraka ary misintona ny windows 10 amin'ny solosaina dia nanomboka ka nandritra ny fotoana ela dia tsy mila manao zavatra hafa intsony ianao, ny mpamosavy vaovao dia mameno ireo rakitra rehetra ao anaty solosaina irery ianao dia mila miandry fotsiny ianao hamita ny fizotrany hahafahanao manindry ny fametrahana alohan'ny fametrahana dia miankina amin'ny hafainganam-pandeha ny Internet sy ny fahaizan'ny solosainao Ho ahy, naharitra adiny telo teo ho eo ny fizotran'izany rehetra izany Ny fotoana fanomanana rehetra dia azonao atao ny manohy miasa amin'ny solosaina. vita ny fanomananaMikatona ny lahatahiry sy ny rindranasa rehetra raha toa ka tsindrio Install , Windows 10 dia hanomboka hametraka ary vonona izahay. Tsindrio ny Install Mandritra ny fametrahana dia tsy mila manao na inona na inona ianao. Hiverina imbetsaka ny solosaina azafady aza vonoina ny solosainao. Nifarana soa aman-tsara ny fanavaozana Hitanay ireo teny tonga soa ary ankehitriny dia mila manaiky ny politika momba ny fiainana manokana izahay fa tsy mila azy io, esory ny boaty rehetra ary tsindrio Ekeo ny birao fa nosokafan'ny windows 10 vaovao andao jerena ny famaritana ny fikandrana vaovao hanokatra ny mpikaroka tsindrio havanana amin'ity solosaina ity ary safidio ireo fananana ao amin'ny windows 10 vaovao dia miseho amin'ny fomba vaovao eto hitantsika fa ny solosainako izao manana ny kinova farany an'ny Windows 10. hitanay ihany koa ny hitsin-dàlan'ny rindranasa rehetra nataoko teo amin'ny birao ary ankehitriny tsy maintsy manamarina ny fomba fiasan'izy ireo eny fa tsara daholo ny fampiharana raha mbola tsy manokatra bokotra fanombohana vaovao aho ary eto koa ny zava-drehetra hafa noho ny ao amin'ny Windows 7. izao aho dia hamerina hijery ny fomba namonjenan'ny My Windows Click Click avy eo ny setting eo amin'ny varavarankely izay mipoitra iclickupdate sy Security Activation, eto dia hitantsika ny fijanonan'ny rafiko. navadika, ary amin'ny faran'ity lohahevitra ity dia hasehoko anao ny fomba hamerenana ny Windows 7 raha tsy tianao ny Windows 10 ka hatramin'ny Windows 7.
Ny rafitra taloha dia azonao averina ao anatin'ny 10 andro amin'ny alàlan'ny fanindriana eto ary avy eo manaraka ny torolàlana momba ny rafitra Misaotra anao nijery ny lahatsoratro tsara vintana
Ahoana no hanitiko ny Windows 7 tsy mihatra amin'ity fanavaozana ity?
Ahoana no ataokoamboary ity fanavaozana ity dia tsy mihatra amin'ny solo-sainanao?
Zahao nyvaovao faranyFifaninanana fonosanaNy Windows-naoVersion.
Zahao nyvaovao faranyFifaninanana fonosanaNy Windows-naoArchitecture an'ny processeur.
Zahao nyvaovao faranyTantara.
Mihazakazaha nyWindows UpdateMpanaparitaka olana.
Vaovao farany Windows10 Miaraka amin'ny KB vao hainganavaovao farany.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny fomba namahako ny toe-javatra iray izay nanandramako nametraka fanavaozana avy amin'ny microsoft ianao dia azonao atao ny mampihena izany ary mandehana amin'ny kinova fikandrana eto azonao jerena izay kinovan'ny Windows ampiasainao Afaka mahita ianao fa mampiasa ny kinova faharoa Zeroos Build 19042.1052 Fa hohazavaiko ny fomba famahako ity olana ity ka raha mitovy ny toe-javatra misy anao dia azonao atao ihany koa ny mamaha ny olana.
Ka inona no mitranga dia manandrana mametraka ity kinova Windows Update ity amin'ny fitaovan'ny mpampiasa aho Jereo ity raha ny marina ny fanavaozana farany nivoaka tamin'ny volana Jona ka tamin'ity volana ity dia Jona ary nanandrana nametraka ireo kb-five-zero-zero-four- aho enina fito-enina amin'ny fitaovan'ny mpampiasa e ary tamin'izany fotoana izany dia napetraka miaraka amin'ity kinova ity ny fitaovan'ny mpampiasa. Io mihitsy io kinova io. Nandritra ny fizotry ny fametrahana dia nahazo ity hafatra diso ity aho milaza fa tsy azo ampiharina amin'ny mpamatsy ny solosainao ny fanavaozana ary hitanao, eh, misy fampahalalana vitsivitsy momba ity rafitra fiasa ity, tsara momba ny fanatsarana sy ny fanamboarana bibikely, fa eto kosa milaza hoe ahoana no nataonao Nahazo ity fanavaozana ity Ny fanavaozana dia mety raha miverina amin'ity lahatsoratra ity amin'ity tranokala Microsoft ity indray aho ka napetraka miaraka amin'ity fanavaozana ity ny fitaovan'ny mpampiasa ary milaza amiko ity fanavaozana ity fa tokony hapetraka ity kinova fanavaozana ity alohan'ny ahafahako mametraka ity fanavaozana ity ka raha apetraka miaraka amin'ity fanavaozana ity ny fitaovako dia tsy ho afaka hametraka ity fanavaozana ity aho ka azo antoka fa inona no tokony hataonao hamahana ity olana ity? Hizaha izay kinovan'ny windows ampiasainao.
Ka raha manandrana ny mpamorona anao ohatra ianao dia manana an'ity kinova an'ity OS ity ary manandrana mametraka ity kinova Windows ity ianao, ka mandehana fotsiny amin'ny google, avelao aho hampiasa an'ity ohatra iray, mandehana fotsiny mankany amin'ny tranokala google avy amin'ny google ary avy eo apetraho ao fotsiny io laharana KB io dia ho hitanao eto fa misy tranokala faharoa eto miaraka amin'ny fanohanana avy amin'ny microsoft hahafahanao mahazo vaovao momba ity fanavaozana KB ity dia tsindrio fotsiny, na sokafy fotsiny ity sy ny mpitety raha mila fanazavana fanampiny. Raha mikorisa ambany ianao dia afaka mahita ny fomba hahazoana an'ity fanavaozana ity. Ka rehefa hitanao ny fahazoana an'ity fanavaozana ity dia holazainao aminao izay fanavaozana hapetraka aloha alohan'ny hametrahana ity fanavaozana ity June Updates mba handeha tsara ny zava-drehetra nefa tsy nahazoako an'ity hafatra diso ity intsony aho.
Ahoana no namahanao azy raha toa ka milaza ny hafatra diso fa tsy azo ampiharina amin'ny solo-sainanao ny fanavaozana dia i Calvin Johnson no anarako, azafady, raha nanampy anao ity lahatsoratra ity, aza adino ny manome thumbs up ahy ary ny ahy koa Misoratra anarana amin'ny fantsona youtube ho an'ny lahatsoratra mifandraika i2 bebe kokoa hahafahako miasa amin'ny orinasa amin'ny maha-mpandrindra IT. Rehefa sendra toe-javatra iray ahafahako mamaha ity olana ity dia tena manandrana manao lahatsoratra momba ny fomba hamahana ity Situation ity aho. Azonao atao koa ny mahita an'io masinina ampiasaiko io izao, milina virtoaly aho satria manana mpizara ao an-trano, izay azoko atao ny maka tahaka ilay olana ary manao fiofanana hafa koa.
Azafady, aza adino ny mamela hevitra ary koa ny mailaka mailaka-mailakao aho handao ny mailakao amin'ny famaritana an'ity lahatsoratra ity mba hahafahanao mandefa ny mailaka anao manokana ary hamaly anao faran'izay haingana aho. Misaotra betsaka ary manantena ny hahita anao amin'ny manaraka
Fa maninona no tsy apetraka ny Windows Update?
Raha nyWindows Updatefanompoana diatsy mametrakafanavaozana araka ny tokony ho izy, manandrama mamerina amin'ny laoniny ny programa. Hiverina indray io baiko ioWindows Update. Mandehaam-baravarankelyFikirana>vaovao faranysy Security>Windows Updateary jereo raha mety misy ireo fanavaozananametrakaizao.5 Mey 2019
Raha manandrana manavao ny solosainao ianao ary tampoka eo dia mahazo hafatra toa an'ity ianao, dia tsy napetraka ny fanavaozana sasany ary tsy mahomby sy tsy mahomby ary tsy te-hametraka ireo fanavaozana ireo, ny vahaolana ho an'ity iray ity ny vahaolana ary ny iray amin'ireo vahaolana izay amin'ny zavatra niainako dia manome ny valiny tsara indrindra sy miasa amin'ny ankamaroan'ny fotoana dia lazaiko fa manodidina ny 80% ny fotoana - raha mampiasa Windows 7 ianao dia tsindrio ny bokotra fanombohana tsindrio ny solosaina raha mampiasa Windows ianao Kitiho ny fikandrana 8, mankanesa any amin'ny metro manomboka amin'ny efijery ary manorata solosaina fotsiny dia tokony ho hitanao eo izany, sokafy tsara raha vao eo amin'ny solosaina ianao dia manohiza ary sokafy ny kapila mafy C.
tsindrio ary sokafy ny fampirimana windows ao amin'ny folder windows dia mandehana mitadiava fampirimana antsoina hoe softwaredistribution izao ao anatin'io fampirimana io izay misy ny tantaran'ny fanavaozana anao dia mila tsindrio havanana ny anarana hoe fizarana lozisialy ho daoldall, raha vao mihazona izany ianao segondra iray ary mbola mieritreritra ihany fa mifindra monina ianao izao ht mahazo hafatra diso toa izao ny antony mety hahazoanao ity hafatra diso ity dia amin'izao fotoana izao dia efa mampiasa an'ity fampirimana ity ny Windows Update ka tsy maintsy mandroso isika izao ary mamely. fa tsy handeha ianao dia tsy hanao izany, azonao atao ny manonona azy izao ka mila mampiasa ny solosaina ianao izao amin'ny boot Safe Mode arakaraka ny ananananao ny Windows 7 mandroso ary tsindrio Start ary kitiho ny Restart ary rehefa manomboka ny solo-sainanao ny solo-sainanao F8 fanalahidy miverimberina mandra-pahazoanao menio manontany anao Na te hanana fomba azo antoka tambajotra ianao, lazao ny iray miaraka amin'ny mailaky ny baiko na manomboka Windows araka ny tokony ho izy, ny zavatra ataonao dia rehefa ao anaty maody azo antoka ianao dia safidio ny fomba azo antoka anaovanao ireo prôte mitovy. s ka mandehana any amin'ny solosainako mandehana any amin'ny localdisk C dia tsindrio ny windows fa mitady ny fizarana rindrambaiko Safe Mode ianao dia tokony hahazo ilay rakitra afaka miova anarana. Hamarino tsara fa soloinao ny anarana hoe 'antitra'. Ampio ity rakitra ity amin'ny Safe Mode.
mampihetsika ny fomba fijery 2010
Raha manana Windows 8 ianao dia mila manokatra ilay lahasa, kitiho ny bokotra fanombohana, tsindrio ny bokotra fanombohana amin'ny efijery fanombohana Metro ary soraty amin'ny ms config. Tokony hipoitra vetivety eto ny fanahafana. Raha vao mipoitra ny config config dia mandehana manamboatra ny boaty boot ary misafidy Safe Mode, misafidy Safe Mode ianao ary avy eo dia tsindrio Ampiharo, avy eo tsindrio OK ary avy eo mandroso ary avereno indray ny solosaina.
Raha mamerina amin'ny Windows 8 ianao dia hamerina amin'ny Safe Mode ary avy eo amin'ny Safe Mode toa ny nolazaiko fa mandehana amin'ny Distribution an'ny lozisialy, tsindrio eo amboniny ary omeo anarana ny fizarana lozisialy ho solosaina ary avereno avereno tsara ny solo-sain'ilay solo-sainao rehefa miantso ireo fanavaozana anao ianao , ho vaovao izany. Toa mbola tsy nahazo fanavaozana mihitsy ianao. Aorian'izay dia tsindrio ny Check for Updates ary hanomboka hanamarina ny fanavaozam-baovao izy ary hanandrana hametraka azy ireo amin'ity indray mitoraka ity ary tokony handeha 80% amin'ny fotoana izy ity, ity fomba ity dia tokony handeha tsara raha soloinao anarana ny fampirimana fizarana lozisialy ho noforonina vaovao ary nanomboka tamin'ny rom freshin okay, azafady mba ampahafantaro ahy raha mety aminao ity, mandrosoa ary manome hevitra momba ny fizarana fanehoan-kevitra ao amin'ilay lahatsoratra raha mila fanampiana ianao ary ampahafantaro anay raha toa ka mety aminao izany, raha tsy izany dia mila mandray izahay jereo akaiky kokoa misaotra ny fijerena ny hadinanan'i Don mba hisoratra anarana lahatsoratra mahasoa kokoa toa ireto ary tahaka ny nolazaiko, ampahafantaro ahy raha mety aminao izany ary mirary tontolo andro ho anao
Mbola azo havaozina ve ny Windows 7?
Windows 7tsy nifarana tanteraka ny fanohanana.MicrosoftdiaNa izany azamanolotra “fiarovana maharitravaovao farany”Ho azy, fa ho an'ny fikambanana toa ny orinasa sy ny governemanta ihany - ary raha tsy mandoa sarany mitombo hatrany ireo fikambanana ireo. Izany sarany izany dia natao hamporisihana ny fikambanana hanaohanatsarana.
Tongasoa eto amin'ny zava-niainana androany manamboatra fanavaozana mandeha ho azy ao amin'ny Windows 7 izahay.
Eto izahay dia manana rafitra fitsapana manao fametrahana madio ny Windows 7 Pro miaraka amin'ny Service Pack 1. Izany dia mitranga rehefa manandrana mijery vaovao farany izahay, mahazo hafatra diso isika eo am-piandohana dia tsy maintsy manokatra mpikaroka amin'ny Internet isika ary manafatra chrome mazava ho azy raha toa ianao ka efa manana mpitety finday aza misalasala mandingana ity dingana ity izao fa manana ny hany fampiasana azo ekena ho an'ny mpikaroka Internet izay azontsika atao isika dia afaka mifamadika amin'ny Chrome mila misintona sy mametraka ny fanavaozana ny taratasy fanamarinana faka dia tokony hapetraka aloha ity fanavaozana ity raha tsy izany dia tsy afaka mametraka ny fanavaozana ny stack raha vao vita ny fametrahana ny fanavaozana ny taratasy fanamarinana faka. Azontsika atao ny manohy ny fividianana ny fanavaozana ny stack ho an'ny Windows 7.
Raha fintinina, ny servisy stack dia singa mampiditra Windows Updates. Manaraka izany, mila maka sy mametraka ny fanavaozana ny Windows Update Agent isika, ny Windows Update Agent no manao ny hamafiny, raha lazaina, mba hijerena izay rafitra fiasa napetraka sy ny fomba patch -Level ho an'ny rafitra mba tsy hikarohana ireo fanavaozana manondro fa ireo zavatra apetraka amin'izao fotoana izao dia nosoloina fanavaozana hafa izay efa napetraka na fanavaozana izay tsy mihatra amin'ny kinova Windows ao amin'ny rafitra aorian'ny famitana tanteraka dia eo am-pahatongavana ny fifandraisana amin'ny mpizara fanavaozana haverina . Rehefa miverina amin'ny Windows Update isika ary manandrana mijery ireo fanavaozana dia tsy mahazo hafatra diso avy hatrany izahay, fa maharitra ela be ny fikarohana ireo vaovao farany, hialana amin'izany dia afaka mametraka ny Windows 7 Update RollupWindows 7 isika izay voalohany ary ny fonosana Serivisy ihany no noraisina tamin'ny febroary 2011.
Raha tokony ho fonosana serivisy faharoa, Windows 7 dia nanana fanavotana vaovao 2016 nanomboka ny Mey. Ahitana paty nilanja dimy taona teo ho eo. Ny rollup fanavaozana dia singa iray tena ilaina amin'ny fanamboarana ireo fanavaozana mandeha ho azy aorian'ny fametrahana ny Windows Update Agent dia tsy voatery hanohitra efa ho folo taona ny famerenana sy ny fanamarinana ireo fanavaozana izao, manontany tena aho hoe maninona no mijanona eto raha afaka mandroso ary mahazo izay ilaina. ny fanavaozana ny esu dia manadino ny fanohanana lehibe an'ny windows 7 izay nifarana tamin'ny jan 2020 tsy azo atao foana ny manavao ny solosaina rehetra mba hampandehanana rafitra miasa manohana satria ny tsipika mivelona dia manolotra fanavaozana fiarovana nohatsaraina ho an'ny Windows 7 i Microsoft.
Mampalahelo fa tsy atolotra ny mpanjifa ity programa ity na dia azonao atao aza izany, tsy amidin'i Microsoft izany. Miaraka amin'izany, misy fomba iray hialana amin'ny Eligibility Check for Extended Security Updates, izay midika fa, amin'ny teoria , azonao atao ny mamarana ny programa amin'ny taona Afaka manohy mandray fanavaozana ny fiarovana ho an'ny Windows 7 ianao amin'ny 2023. Afaka maka fotoana fohy isika hisintonana ireo fanavaozana ilaina ary ny fametrahana azy ireo dia tsy maintsy atomboka amin'ny fametrahana ny fanavaozana ny stack servicing ho an'ny volana martsa 2019. Voalohany, hametraka fanavaozana izahay ho fanohanana ny sonia kaody sha-2 manomboka ny volana septambra 2019 Mba hamelomana indray ny asa fanavaozana mandeha ho azy ao amin'ny Windows 2000 sy XPnow, mila mampidina sy mametraka ny fanavaozana ny stack vaovao momba izany izahay.
Eny, ity no fanavaozana ny stack fanompoana fahatelo izay apetratsika, dia iray amin'ireo teo aloha tsy mila manao ny esu bypass na tsia Ny fitaovana esu bypass dia mamoaka lesoka raha toa ka tsy napetraka ny fanavaozana ny stack servicing ho an'ny 2019 raha tsy izany ianao ihany no farany. afaka mampiasa ny fanavaozana ny stack farany, fa ny zava-dehibe dia ny fananantsika ny fonosana fanomanana ny fahazoan-dàlana esu ho an'ity fanavaozana ity izay ahafahana mametraka ny fanavaozana ny fiarovana maharitra. Haharitra minitra vitsy ary mety hamerina reboot vitsivitsy hametrahana ireo patch ireo. Vantany vao vita isika dia afaka miroso amin'ilay fitaovana bypass ihany.
Ny zavatra azontsika dia rakitra voafintina izay misy ny fitaovana bypass. Afaka mamorona fampirimana vaovao eo amin'ny birao isika ary avy eo dia misintona sy mandatsaka ny atiny ao. Sokafy ny fampirimana vaovao dia tsindrio havanana ny Live OS Setup ary safidio ny Run as administrator.
Misokatra ny varavarankely misy ny baiko. Tianay ny hisafidy ny safidy 1 ho an'ny fametrahana tanteraka. Raha toa ka nahomby daholo ny paty nilaina dia tsy tokony hahita lesoka momba ny fanavaozana tsy hita ianao. Sokafy izao ny Windows Update ary zahao ireo fanavaozana. Nandany fotoana ampy io. Nandritra ny fitsapana ary rehefa tonga ny fotoana, dia nisy fanavaozana 169 azo alaina, mahafinaritra avy eo raha hitako fa milay be fotsiny ny mitondra ireo fanavaozana ireo ary mamindra azy ireo amin'ny kapila fametrahana Windows 7. Azonao atao ny mametraka Windows 7 ary afaka samy mahazo daholo ireo fanavaozana azo alaina ho an'ny fanavaozana mahazatra sy mandroso, apetaho amin'ny kapila fametrahana izay ho hita amin'ny archive.org ao anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Ny mpampiasa ny fantsona dia mahazo fidirana mialoha any aminy, noho izany azonay izany satria nanamboatra fanavaozana mandeha ho azy ho an'ny Windows 7. Te-haka fotoana kely aho ary misaotra ny rehetra avy amin'ireo mpiaro ahy, tena mankasitraka ny fanohananareo aho, misaotra anao nijanona mandra-pahatongan'ny manaraka lahatsoratra
Fa maninona no tsy mandeha ny fanavaozana Windows 7 ahy?
Tampoka teo, tamin'ny 12/4/2017 dia nanomboka nilaza ireo solosainan'ny windows 7-ko fa tsy mandeha ny serivisy fanavaozana ny windows ary angamba tokony haverina ny solosaina. Ny fanarenana dia tsy fanitsiana ny olana. Ho fanampin'izay, mandeha ny serivisy. Novonoiko izy io ary natomboko tamin'ny milina efatra tsy nisy fahombiazana.
Azo atao ve ny manavao ny Windows 7 mankany Windows 10?
Na izany aza, raha tsy manana ireo fahazoan-dàlana ireo ianao dia mety tsy ho afaka hanavao ny Windows 7 intsony. Tokony handrafitra ny fanavaozana ny Windows 10 ianao, na ny fifindrana mankany amin'ny fizarana Linux maoderina, hiantohana ny filaminan'ny PC-nao. Na dia hahatonga ny Windows 7 ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa aza ireo dingana etsy ambony, dia mbola misy ny olana mety hipoitra.
Inona no hatao raha toa ka tsy manomboka ny Windows Update?
Kitiho ny globe Start ary soraty ao anaty boaty lahatsoratra ny serivisy. Tsindrio ny Services amin'ny lisitra miseho. Ao amin'ny varavarankely izay mipoitra avy eo (abidia), dia tadiavo ny Windows Update. Tsindrio havanana eo amboniny (kitiho ankavia raha ny totozy napetrakao amin'ny ankavia) ary safidio ny Stop.
Inona no hatao raha tsy havaozina ny Windows 7?
Ao amin'ny boaty Fikarohana, soraty cmd, kitiho ankavanana ny valiny ary safidio ny Mihazakazaha ho mpandrindra. Raha vantany vao nahavita ireo dingana ireo ianao dia hamerina handamina ny fampirimana i Windows 7 ary hampidina indray ireo singa ilaina rehetra. Atsangano indray ny fitaovanao hampihatra ireo fanovana, sintomy ny fanavaozana Windows ary zahao raha mitohy ny olana.